मेलबर्नमा डिसेम्बर ७ बाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरुलाई आउन दिइने ! « MNTVONLINE.COM
मेलबर्नमा डिसेम्बर ७ बाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरुलाई आउन दिइने !
कोरोना भाईरसका कारण बन्द रहेको मेलबर्नको अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी डिसेम्बर ७ तारिखबाट खुल्ने भएको छ । होटल क्वारेन्टीनबाट कोरोना भाईरस मेलबर्नमा फैलिएपछि मेलबर्नबाट विदेश जाने विमान सेवा सुचारु भएपनि करिब ४ महिनादेखि विदेशबाट मेलबर्न आउन रोक लगाइएको थियो ।
२१ दिनदेखि कोरोना संक्रमण शून्यको सफलता प्राप्त भएपछि गएको जुलाईबाट बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीको आगमनलाई खुला गर्न २३ नोभेम्बरको समय तोकिएको भएपनि भिक्टोरिया राज्य सरकारले अझै दुई साता थप गरेर डिसेम्बर ६ सम्म बढाएको छ । सुरुवातमा दैनिक १ सय ६० यात्रीलाई मात्रै आउन दिने गरी कोटा तोकिएको छ । पछि परिस्थितिको विश्लेषण पछि यो संख्या बढाउन सकिनेछ ।
अबको होटल क्वारेन्टीनमा काम गर्नेहरुको विषयमा पूरै अनुसन्धान हुने भएको छ । उदाहरणको लागि होटल क्वारेन्टीनमा क्लीनरको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिले मात्र होइन उसको परिवारकै मानिसरुले पनि एज्ड केयरमा काम गर्न पाउने छैनन् । होटल क्वारेन्टीन सम्बन्धी थप प्रावधानहरु छिट्टै सार्वजनिक गर्ने सरकारी तयारी छ । यसअघि होटल क्वारेन्टीनका साथै होम क्वारेन्टीनमा समेत बस्न पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रि यात्रीको आगमनलाई खोल्ने तयारी भएको थियो ।
पाकिस्तानमा कोरोनाको दोश्रो लहर – शैक्षिक संस्था पुनः बन्द, परीक्षा स्थगित
पाकिस्तानमा कोरोनाको दोश्रो लहर - शैक्षिक संस्था पुनः बन्द, परीक्षा स्थगित
छ वर्षअघि तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको भेरी जलयात्रा अलपत्र
बिबिसीले तयार पारेको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परिन् १८ वर्षीया सपना रोका
३८ सयमा लाइफब्वाइ साबुन किनेको बिल पेश गर्ने नगरपालिकामा अख्तियारको छापा
भिक्टोरिया बन्यो २५ औं दिनमा कोरोनामुक्त, छैनन कुनै सक्रिय संक्रमित
कोरोना महामारीकैबीच चार देशका विद्यार्थी नोभेम्बर ३० मा अष्ट्रेलियाको डार्विन आइपुग्दै !
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई न्यानो स्वागत गरिरहेको तास्मानिया !
मेलबर्नबाट एक नेपाली युवा बेपत्ता, खोजीमा सहयोग गर्न भिक्टोरिया प्रहरीको आग्रह !
भिक्टोरियामा चौविसौं दिन पनि शून्य नयाँ संक्रमण
कोरोनाले बन्द भिक्टोरिया-न्यूसाउथवेल्सको सिमाना १ सय ३८ दिनपछि खुल्यो !